Creative Writing » အကောင်ကြီး အမြီးရှည် – KZ’s မြီးရှည်ဆိုင်	51
စိမ်းစိမ်းလေး – နံနံပင်
မပါမဖြစ် – ၁) ကြက်သွန်ဖြူရည်
အဆာပလာ – ၁) အီကြာကွေးချောင်းကို သေးသေးညှပ်ထား
ငင်။ ဟင်းရည် မေ့ခဲ့ပြီ။
မိုင်းသာ မြီးရှည် ပထမဆုံး စားပွဲဝိုင်းမှာ ခင်ဗျားတို့ မြင်ရမှာက ဘဲဥပုံပုဂံပြားထဲမှာ နန်းလတ်မြီးရှည်မုန်ဖတ်အလွတ်တွေပါ။
*** ငရုပ်ချဉ်ရည် တကယ်တော့ အဲဒီအချဉ်ရည်ဟာ ချဉ်စော်ခါးသီးနဲ့လုပ်တဲ့အချဉ်ဖြစ်ပေမယ့်
နံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook- weiwei (http://mandalaygazette.com/176111)
မြေအိုး မြီးရှည် လုပ်နည်း- Yin Nyine Nway (http://mandalaygazette.com/21221)
ကျိုင်းတုံ မြီးရှည် ဝက်နံရိုး ရှယ်နံရိုး ကို လိုအပ်သလောက်ရေနဲ့ပြုတ်ပါမယ်…
၁) ဝက်နံရိုး မြီးရှည် လုပ်နည်းလေး ဆီတိုဖူးကို ဆီသတ်ပြီး ရေကျဲကျဲနဲ့ ဖျော်ထားတာပါ။
https://www.facebook.com/hubbykitchen?pnref=lhc – အိမ်ရှင်ထီး၏ မီးဖိုချောင် – Hubby Kitchen .
ရှမ်းမြီးရှည်~~~~~~~နန်းလတ်ဖတ်ထဲကို ကြက်သား သို့ ဝက်သားပြုတ်ထားတာထည့်မြေပဲကြော်အခွံမကျွတ်ကိုအလုံးလိုက်ထည့်ပဲပင်ပေါက်ရေဖျောထည့် မုန်ညင်းချဉ်ထည့်အရသာထည့် အရိုးပြုတ်ရည်ဖျောင်ဖျောင်လေးထည့်ကြိုက်တတ်ရင်ငြုတ်သီးကြော်ထောင်းထားတာထည့်ပဲငပိအရည်ထည့်ရမယ် အာ့လေးပြောဖို့ကျန်ခဲ့တယ်နံနံပင်လေးလဲထည့်ရမယ်အဲ့မှာအရည်ညိုညိုလေးကပဲငပိရည်သူကဖြူဖြူ အရည်ရွတ်ရွတ်ကလေးနဲ့ စားကောင်းတယ်။
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျောက်စ် မြီးရှည်က မြင်းခြံနည်းဗျ … စလုံးမှာတုန်းက အတူနေသူငယ်ချင်း မြင်းခြံသား ငထွန်းရဲ့နည်း … အဲဒါကို မော်ဒီဖိုင်းလုပ်ထားတာ…
ခင်ဇော် says: ဖတ်ရုံနဲ့ ဆွေမျိုးးမေ့သွားးးလို့
မွသဲ ( 17082011 ) says: ငင့် တများရှမ်းမြီးရှည်ကောဟင်။ သများက အိုက်ရှမ်းမြီးရှည်ရယ် မန်းလေးမြီးရှည်ရယ်ပဲကြိုက်တယ်
ခင်ဇော် says: ဖြည့်လိုက်ပြီ မွသဲ။
Mr. MarGa says: မေလကတည်းက ပြောထားတာ ဟလား
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါတွေ စားပွဲပေါ် ပြင်ပြီးရင်….
အဲချက်နည်းလေး သဘောကျတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: အတိုင်းအတာက
တောင်ပေါ်သား says: ဗိုက်ဆာရတဲ့အထဲ ဒင်းတို့မို့ တင်လျက်တယ်
ခင်ဇော် says: သွားစားဖြစ်ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါနော်။
ပို့(စ) ထဲ ထည့်ဖို့ ဓာတ်ပုံနည်းလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ပြတ်တုန်း လပ်တုန်း ၂၃ တဲ့ ကလေးမရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဟားးးး ဒီပိုစ့်လေး မြင်ရတာ..၀မ်းသာလိုက်တာ….။ ညကတော့ ဖဘမယ် သူများတင်ထားတဲ့ ရှမ်းစာတွေကြည့်ပြီး ငတ်ကြီးကျနေတာ….။ ကွကိုယ်လုပ်မစားတတ်လို့ အိမ်ကလူတွေကို မျက်နှာချိုသွေးနေရတဲ့ဒုက္ခတော့ ကုန်ပြီ….အဟေးးး ဟေးးးးး။
ခင်ဇော် says: ရှမ်းစာ က ရှမ်းစစ်စစ်ချက်မှ စားကောင်းသလိုပဲ။
အောင် မိုးသူ says: မြီးရှည်တော့ အရမ်းကြိုက်တဲ့အထဲမပါဘူး။ မာလာဟင်းတော့ အနည်းငယ်ကြိုက်တယ်။း)
ခင်ဇော် says: ဘယ်ဟာကို အများဂျီး ကြိုက်လဲ
naywoon ni says: အ​ကောင်​ကြီးပြီး အမြီးရှည်​တာက ​ဂေါ်ဇီလာ ! လုပ်​မစား​တော့ဘူး ။ နည်းသိထားရင်​ ​ကောင်းတဲ့ ဆိုင်​​ရွေးစားတတ်​ဘီ ။
ခင်ဇော် says: နောက်ခါ ဥနီ ကို ဂေါ်ဇီလာဟင်းချက်ကျွေးမယ်။
Wow says: မီးရှည်ကို ကြက်/၀က် အသားပြုတ်နဲ့ပဲကြိုက်တယ်… ဟင်းချက်ရင် ဟင်းနံ့ထွက်ပီး ဟင်းနဲ့ မုန့်ဖတ်နယ်စားနေရသလိုပဲ… မန်းလေးနဲ့ မိုင်းသာမီးရှည် ကြိုက်ဆုံးပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ကြိုက်တတ်ရင် ချက်ဟင်းကို ပိုအရသာရှိတာအေ့။
Mike says: .မန်းလေးသာနေခဲ့ဖူးတာ..မြီးရှည်ကောင်းကောင်းမစားဖူးခဲ့ဘူး
.မန်းလေးနောက်တစ်ခေါက်သွားဖြစ်မှ ၀ါးဖြစ်အောင်ဝါးအုံးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
Mike says: .ကောင်းကင်ပြာပြောတဲ့ ….
.စားဖြစ်အောင်စားအုံးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ရန်ကုန်တော့မသိ။
ဗုံဗုံ says: ဂိုဂိုလေးမွင်းငှါးဘဲကြိုက်ဒယ်ဆိုမှ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: မွင်းဂါး ပို့(စ) ကပြီးဘီ။
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ် အူးမိုက်…။ လှိုင်မြင့်မိုရ် ကြင်ကြင်က ကံလမ်းက ၀င်ရင် ၂လမ်းမြောက်မယ်…။ အိုက်ဆိုင် လူအတော်စည်တယ်….။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲထဲမယ်…ကန်စွန်းရွက်ပါ ပြုတ်ပြီး ထည့်ပေးတယ်…။ တခါတလေ တကူးတကတာင် သွားစားဖြစ်တယ်….။
Alinsett@Maung Thura says: မှီးရှည်ကို ဖွေးဖွေးလောက် မကြိုက်ဘူး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: နာကတော့ ဖွေးဖွေးကို မြီးရှည်လောက်မကြိုက်ဝူး
pooch says: ကျောက်မဲမြီးရှည်လည်း စားလို့ကောင်းတယ် သူက တို့ဟူးပါတယ်မှတ်တာပဲ ပဲပုပ်နဲ့
ခင်ဇော် says: ကျောက်မဲ မြီးရှည်က မွသဲ နည်းထဲကို ပဲပုတ်လှော်မှုန့်လိုမျိုးရယ် တို့ဟူးကြော်ရယ်ထည့်စားတယ် ထင်တယ်။
pooch says: တို့ဟူးကြော်မဟုတ်ဖူး တို့ဟူး အစို
Wow says: တို့ဟူးနွေးအရည်နဲ့ ပဲပုတ်မီးကင်ပီး၊ ထောင်းပြီး ဆီသတ်ထားတာမိုးလား..
Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: wow ပြောသလိုလဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး တို့ဟူး အစို အတုံးပျော့လေးတွေ
ကဲလာခဲ့ ကျောက်မဲသွား စားကြတာပေါ့ Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: ပုခ်ျပြောတဲ့ကျောက်မဲမြီးရှည်စားဖူးတယ်…. ကောင်းတယ်…. မြီးရှည်ကြိုက်တဲ့အပြင်… ဆိုင်ရှင်မိသားစုနေ့လည်စာ ပူပူနွေးနွေးကြော်လှော်ချက်နေတာတောင်..ခုထိမျကိစိထဲကမထွက်… သရေကျတာ.. :sarr:
ချက်နည်:တွေထက်…. ချက်ပြီး ခွက်နဲ့ရှေ့အရောက်ပို့ပေးတာပဲလိုချင်တယ်….ငှဲ…ငှဲ…. အခုလောလောဆယ်စားချင်နေတာ ဗီယက်နမ်အပြုတ်တွေ…ခေါက်ဆွဲနဲ့အသီးအရွက်ပြုတ်တွေ…အမဲပြုတ်တွေ… ရန်ကုန်မှာဆိုင်မရှိ.. အရမ်းကြိုက်… ပြောရင်းသရေကျ… :sarr:
ခင်ဇော် says: ဒီလာခဲ့ ရင် လိုက် ကျွေးမယ်။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အန်​တီစား​နေဂျ လိပ်​​ဂေါင်းအစိမ်းသုတ်​​လေး နည်း​ပေးပါအုံး​ညော်​
ခင်ဇော် says: မနေ့ကပဲ
black chaw says: ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ လောက်က
ခင်ဇော် says: ဒါပေါ့လေ…
Wow says: နိကျတော့ ကောင်းပြည့်ကနေ အလင်းရောင်ဖြစ်သွားဒါရော ထဲ့ပေါအူးလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ဒါဂဒေါ့ ….
Mr. MarGa says: ခုတလော ကျောင်းတွေပိတ်ထားတော့
မြီးရှည်ဆို ဘာကြီးဖြစ်နေနေ လာထားပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: စားးဖြစ်တဲ့နေ့
Swal Taw Ywet says: ရန်ကုန်မှာ မုန့်တီသုတ် ဘဲ စားဖြစ်တယ်။
ခင်ဇော် says: အာ့ဆို
Ma Ei says: Feel မှာ အထမ်းမြီးရှည် ကောင်းတယ်…
ခင်ဇော် says: လုပ်ပြီးရင် ပို့(စ) တင်ပေးနော် မွအိ
ခင်ဇော် says: မနန်းကေသီ ဆိုတဲ့ အမတစ်ယောက် ပြောလို့ ကျောက်မဲ မြီးရှည်ကို ဖြည့်လိုက်တယ်။
kai says: ဘာတွေအကြွေးကျန်နေသလည်းတော့မသိ..။
နန်းနဲ့..မြှီးဘာကွာသလည်း..မန်းသူကိုမေးချင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: အဖတ်ကတော့ တူတူပဲလေ။
ဆန်ခေါက်ဆွဲ ဖတ်က ဆန် အစီးနဲ့ လုပ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: ရတယ်။ ယူချင်တာ အရင် ယူထားလိုက်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit to မီးစက်ကြီ
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit ဟင်းချက်နည်းးများ